जनवरी 20, 2017 नोभेम्बर 16, 2018 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments पुरुष, महिला
महिलाले पुरुषको केके कुरामा ध्यान राख्छन् ! अधिकांश महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाहमा आम पुरुषभन्दा बढी चासो राख्छन् । महिलाहरु पनि यस्ता पुरुषहरु मन पराउँछन् जो फिट र स्वस्थ रहन्छन् । यसका लागि पुरुषहरुले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु जरुरत हुन्छ । मनोवैज्ञानिकका अनुसार महिलाहरु पुरुषको यी कुरामाथि विशेष ध्यान राख्छन् ।
← सांसद लक्ष्मण राजवंशी पार्टीबाट निष्कासित
८२ बर्षको उमेरमा देशमाथि गद्दारी गरेर मर्न चाहन्नः लक्ष्मण राजवंशी →
रिस कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
फ्रेवुअरी 28, 2017 साइन्स इन्फोटेक 0
डिसेम्बर 22, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
4 thoughts on “महिलाले पुरुषको केके कुरामा ध्यान राख्छन्”
Pingback:यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् केटाहरु पातली केटी मन पराउने कारण
Pingback:तपाईंले मन पराएको केटीलाई सोध्नु नहुने कुराहरु
Pingback:केटीले तपाईंलाई मन पराएको थाहा पाउने लक्षणहरु
Pingback:पुरुषलाई कस्ता नारी मनपर्छ ?